Chikwata ichi chine gumbo rimwechete mumafainari aya mushure mekurova Lesotho 3-1 muNational Sports Stadium asi vanoziva kuti kukundwa 2-0 muMaseru neSvondo, kunosvitsa rwendo rwavo kumagumo mumakwikwi aya.
Zimbabwe inofanira kukunda, kana kuita mangange, kana kurohwa zvayo 1-0, kana 2-1, kuitira kuti ikwanise kuenda kumafainari emakundano aya kuCameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018.
Pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviviri izvi kubva muna 1980, Zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe, Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina ichiita mangange.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaProsper Chimusoro, vanoti havasi kuona Lesotho ichikwanisa kurova maWarriors ikozvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe.
Nhengo yerimwe sangano revatsigiri vemaWarriors, reWarriors Fan Club, VaMarcabee Makamure, vanoti Lesotho ichazvindikitwa zvokuti Zimbabwe ichakunda 3-1 sezvayakamboita mumutambo wekutanga.
Asi murairidzi wemaWarriors, Joey Antipas, anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga, hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muAfrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho iyi pasi mumutambo uyu.
Antipas atakura chikwata chake chakasimbisa chinosanganisira Prince Dube, uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders, Joel Ngodzo na Phineas Bhamusi avo vari kupisa kuCaps United, Evans Katema we Dynamos, Wellington Takaendesa weBlack Rhinos, Edward Madzongwe weFC Platinum, pamwe na Ian Nekati uyo ari kuvhara zvibodzwa kuZPC Kariba.
Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo chikwata chenyika chichange chiri munhandare.
Asi mitambo yezvikwata zviri kutungamira makwikwi aya, Caps United neFC Platinum, yambomiswa kusvika neChitatu apo maWarriors anenge adzoka.
Asi hondo yezvikwata zviri kurwira kuramba zviri muPremier Soccer League iri kuenderera mberi, chikwata chiri pasi pasi mugungano iri Yadah, chiri pamusha neManica Diamonds.
MuGweru muchange musingadaidzwe anonzwa apo zvikwata zvemuguta iri, TelOne neChapungu, zviri kusangana muAscot Stadium neMugovera.
Asi mutambo mukuru muPremier League ndeuyo uri kuColliery apo Chipangano cheHwange chiri kusangana nemaSunshine City Boys eHarare City.
Murairidzi weHwange, Nation Dube, ari kuramba kuti chikwata chake chichange chiri muDivision One mwaka unouya achiti iye varipo svondo rino kunyaradza avo vari kuparidzirira mashoko akadai.
Mimwe mitambo iriko muPSL yakamira seizvi:
Herentals v Black Rhinos
Mushowani Stars v Triangle.